Philips Hue wuxuu bilaabay laambadihii ugu horreeyay ee smart ah oo leh Bluetooth, looma baahna buundada | Wararka IPhone
Mid ka mid ah yutiilitida ugu wanaagsan ee qalabka moobiilkeennu waa suurtagalnimada xakamee aaladaha casriga ah ee gurigeenna. Nalalka nalalka, heerkul-kulmeedyada, ama xitaa caws-wadayaasha iyo nadiifiyeyaasha faakiyuumka meelaha fog fog laga xakameyn karo iPhone-keena. Iyo inbadan iyo inbadan oo shirkado ah ayaa lagu dhiirigelinayaa inay alaab ka keensadaan gurigeena una keenaan adduunka qalabaynta guryaha.
Hadda waxaa imanaya wararka noocyo cusub oo nalalka casriga ah Philips Hue. Waana in nooca ugu wanaagsan ee aaladaha casriga ahi ay ahayd in lagu cusbooneysiiyo mid ka mid ah isbeddelada la filayo, baabi'inta buundada kontoroolka. Philips Hue ayaa hada billowday marwada koowaad ee nalalka nalalka ah ee loo yaqaan 'Bluetooth' si aan u xakamayn karno iyadoon qalab dheeri ah lagu darin. Boodka ka dib waxaan kuu sheegeynaa dhammaan faahfaahinta Philips Hue Bluetooth.
Waxaad horeyba u ogaatay in dhammaan noocyada nalalka casriga ah Philips Hue waxay ku saleysneyd shabakada otomaatiga guriga Zigbee xiriirka u dhexeeya nalalka iyo kantaroolayaasha kala duwan ee suuqa. Philips Hue hadda wuxuu la yimaadaa Bluetooth si aan ugu xakameyn karno si ka fudud uguna baahnin buundo (ama buundo) leh Zigbee si loogu xiro iyaga.
Waxyaabaha Philips Hue Bluetooth waxay ka bilaabanayaan guluubka caadiga ah ee A19 guluubka iyo guluubka BR30 ee gunta ka baxa, ee laga heli karo Mareykanka laga bilaabo maanta. Wax soo saarku wuxuu ku yimaadaa saddex nooc: Caddaan ($ 14.99), oo aad ugu fiican jilicsanaanta jilicsan; White Ambiance ($ 24.99), taas oo kuu ogolaaneysa inaad habeyso hooska iftiinka cad; iyo Caddaan iyo Midab Ambiance ($ 49.99), oo bixisa helitaanka malaayiin midab iyo midabyo iftiin cad ah. Waa la bilaabi doonaa mAlaabooyin badan oo Bluetooth ah ayaa dabayaaqada sannadkan iyo 2020-ka.
Waan xakameyn karnaa ilaa 10 guluub oo kala duwan oo leh barnaamijka cusub ee Philips Hue Bluetooth on macruufka ama gacanta cod la Amazon Alexa iyo Kaaliyaha Google. Haa runtii, haddii aan rabno inaan ku xakameyno iyaga oo leh Apple HomeKit (iyo Siri), waa inaan isticmaalnaa Buundada Hue, oo waa isku mid haddii aan dooneyno inaan iyaga ka fog xakameyno, ama ugu isticmaalno barnaamijyada dhinac saddexaad. Ikhtiyaarrada cusub ee otomatiga ee guryaha, in kasta oo aysan kaamil ahayn, haddana shaki la'aan waxay metelaan horumar weyn mustaqbalka qalabka casriga ah ee gurigeenna.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Philips Hue wuxuu bilaabayaa nalalka casriga ah ee uguhoreeyay Bluetooth, uma baahna buundada
"Saxeex la soo gal Apple" waxay keeni kartaa qatar xaga amaanka ah sida ay sheegtay OpenID
Apple wuxuu bilaabay inuu ku iibiyo mitirka gulukooska OneDrop ee bakhaaradiisa